ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ နောက်ဆုံးသမ္မတ မီခေးလ်ဂိုဘာချက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Interview » ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ နောက်ဆုံးသမ္မတ မီခေးလ်ဂိုဘာချက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ နောက်ဆုံးသမ္မတ မီခေးလ်ဂိုဘာချက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
‘‘ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲတာအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး’’
Wed, 2017-08-09 11:44
ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ နောက် ဆုံးသမ္မတ မီခေးလ်ဂိုဘာချက်ဟာ အခုဆို လမ်းလျှောက်တုတ်အကူ အညီနဲ့ လေးလေးကန်ကန်လမ်း လျှောက်နေရပါတယ်။ သူမရှိခဲ့လို့ ရှိရင် ဘာလင်တံတိုင်းကြီးကို ငြိမ်း ငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြိုချခဲ့လို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအများ ကြီးရဲ့ အမြင်မှာ သူဟာ ဆိုဗီယက် ယူနီယံရဲ့ ဂုဏ်သရေကို အဆုံး သတ်စေခဲ့သူလို့ အမြင်ခံရသူဖြစ် ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံသားလူများ စုအတွက်ကတော့ သူဟာ သူရဲ ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံမှာ လူနည်းနည်း လေးဆိုတာထက်ပိုတဲ့ လူတွေက သောကပွေစေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ယောက်အနေနဲ့ မှတ်ယူခံထားရပါ တယ်။ သူဟာ မတ်လက အသက် (၈၆)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီး နေထိုင်မ ကောင်းတာတွေနဲ့ အသက်အရွယ် ရလာတာတွေရဲ့ အမှတ်အသား တွေဟာ သူ့မျက်နှာမှာ ပေါ်လွင် နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ရာဇဝင်ဆိုင် ရာကြီးကျယ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ အတွက် သူ့ရဲ့ မြတ်နိုးမှုဟာ အဲဒါ တွေကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ‘ကမ္ဘာသို့ ပန်ကြားချက်’စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ ဂျာမနီ
အဓိပတိဟောင်း ဟဲလ်မွတ်ခိုးလ်ဘယ် လိုလဲဆိုတာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးမေး ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီတွေ၊ ရုရှားတွေနဲ့ စစ်ပွဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂိုဘာချက်နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
သမ္မတဂိုဘာချက်ခင်ဗျာ။ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ် (၃၀)က ခင်ဗျားဟာ ပွင့် လင်းမှုပိုရှိရေး ဂလက်စ်နော့မူဝါဒ နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပီရီစ တွိုက်ကာမူဝါဒတွေနဲ့အတူ အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်းကြားက ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်စေဖို့စပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ရုရှားသံချပ်ကာကား တွေဟာ ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာ နေရာယူထားပြီးတော့ ခရိုင်းမီးယားဒေသကို မော်စကိုအစိုးရက သူတို့ပိုင်နက်ထဲ သွတ်သွင်းထား ပါတယ်။ ရုရှားကို ဥရောပက တစ်ခါပြန်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ခင်ဗျားနားလည် ပါသလား။
လူတစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်လိုပဲခံစားနေရ နေရ ရုရှားဟာ လေးစားသမှုနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလို့ အ လေးအနက်မှတ်ယူရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရုရှားတွေလောက် ယူက ရိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်သူကမှ ပိုပြီး မစိုးရိမ်ကြပါဘူး။ ဒီမေးခွန်း ကြောင့် ကျွန်တော့်အမေကို ကျွန် တော်သတိရမိတယ်။ ကျွန်တော့် အမေက ယူကရိန်းနိုင်ငံသူပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ဒုတိယအမျိုးသ မီးအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးရိုင်ဆာ ဟာလည်း ယူကရိန်းနိုင်ငံသူဖြစ် ပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း ကျွန်တော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ မတူကွဲပြား တာတွေကို တစ်ခုတည်း ဖြစ် အောင်နဲ့ ဝါဒဖြန့်တာမှာပါဝင်ဖို့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းကြားမှာ ရန်ပွားအောင် လုပ်ပြီး အ ကျိုးရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တုိ့ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ တင်းမာမှုကို ဖန်တီးပြီး အကျိုးရှိနေတဲ့ အင်အားစုတွေရှိ နေပုံရပါတယ်။
နည်းနည်းပိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကာလ တွေဆီ ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ၁၉၉၄ က ဂျာမနီကနေ ရုရှားစစ် သားတစ်ယောက်မကျန် ပြန်ခေါ် ချိန်က . . . ။
ကျွန်တော် ကတိပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း။
လူတချို့က ရာဇဝင်အဆုံးသတ် ပြီလို့တောင် ပြောနေကြပါတယ်။ ရုရှားနဲ့ အနောက်တိုင်းကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ဘာကြောင့်ဆိုး ဆိုးရွားရွား မှားယွင်းသွားရတာ လဲ။
ရုရှားနဲ့ ဂျာမနီကြား ဆက် ဆံရေးက ကောင်းပါတယ်။ ဖက် ဆစ်စနစ်ကြောင့် ဆိုးရွာပြင်းထန် တဲ့ စစ်ပွဲတစ်ပွဲထဲ ဆွဲသွင်းခံခဲ့ရ တဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံနှစ် နိုင်ငံကို ပိုပြီးမျှော်မှန်းဖို့ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ ဥရော ပအပိုင်းထက်ဝက်နီးပါးလောက် ကို ဂျာမန်တွေက သိမ်းပိုက်ခဲ့တာ ပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်ကလေးဘဝ က ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဂျာမန် သိမ်းပိုက်မှုအောက်မှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရလဲဆိုတာ ကျွန် တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါ တယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးရှိနေပေ မယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ အ ချင်းချင်းယုံကြည်အောင်၊ အချင်း ချင်းချဉ်းကပ်ဖို့နဲ့ အချင်းချင်းရင် ကြားစေ့ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ဆဲပါပဲ။ စတာလင်က တစ်ခါက ပြောခဲ့ပါ တယ်။ ဟစ်တလာဟာ ရောက်လာပြီး ထွက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဂျာမန်ပြည်သူတွေ ဆက်ရှိနေတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒီအမြင်မျိုး ရုရှားတွေအားလုံး မြင်ကြပါတယ်။
အတူတူဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရုရှားတွေနဲ့ ဂျာမန်တွေဟာ ထူး ကဲတဲ့ အရည်အသွေးတွေ၊ စွမ်းရည်တွေ ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဂျာမန်တွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာအများစု ကျွန် တော်တို့ ရုရှားတွေမှာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရုရှားတွေမှာရှိတဲ့ ဟာ တစ်ခုခုလည်း ဂျာမန်တွေမှာ မရှိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထူးခြားတဲ့ အံ့သြစရာနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ အချင်းချင်းအားဖြည့်ပေးနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ အရာကို ဖျက်ဆီးပစ်ခွင့်ပြုလို့ မရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အနောက်တိုင်းဟာ သူ ရဲ့ ကတိမတည်ဘူးလို့ ခင်ဗျားစွပ် စွဲတယ်။ ဟဲလ်မွတ်ခိုးလ်လို (ဒါမှ မဟုတ်) ဂျော့ခ်ျဘုရ်ှလို မိတ်ဆွေ မျိုးတွေရဲ့ ရုရှားအပေါ် ကတိတွေ နဲ့ ကြုံဆုံလာချိန်မှာ သူတို့ကြောင့် ခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စိတ်ပျက်ခဲ့ ရလား။
သူတို့ပိုပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့လိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ ဖြစ် ခဲ့တာတွေအားလုံးရဲ့ အများစုဟာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲမှုနဲ့ တိုက် ရိုက် ဆက်နွှယ်နေပါတယ်။ ဆိုဗီ ယက်ယူနီယံပြိုကွဲတာအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ် တင်လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အ နောက်တိုင်းက လူတွေအများကြီး က တိတ်တဆိတ်ကျေနပ်နေပြီး ငါ တို့အရှေ့တိုင်းကို နောက်ထပ်တစ် စင်တီမီတာတောင် ရှေ့မတိုးတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ကို ကတိပေး ခဲ့သူတွေအပါအဝင် အောင်မြင်မှု တစ်ခုလို ခံစားနေကြတယ်။
အနောက်တိုင်းရဲ့ လိမ်တာကို ခံရ တယ်လို့ ရုရှားက ခံစားနေရလား။
ကျွန်တော်အဲဒါကို ဒီလိုပြော ချင်တယ်။ အနောက်တိုင်းအထူး သဖြင့် အမေရိကန်ဟာ အဓိကပူး တွဲသဘောတူညီမှုတွေကနေ ဝေးရာကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကျေး ဇူးပြုလို့ အမှတ်ရပါ။ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ်တွေရဲ့ ဒုတိယထက်ဝက်ကာလ မှာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ အမေရိ ကန်တို့ဟာ မကြုံစဖူးအတူ လျှောက်လှမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်တိုက် တွေကိုစပြီး လျှော့ချခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ စစ်အေး ခေတ်နှစ်တွေအတွင်းမှာ တည် ဆောက်ခဲ့တဲ့ နျူကလီးယားလက် နက်တွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကို အဲဒီအချိန်က ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြ တယ်။ အဲဒါအပြင် ဒီလုပ်ငန်းစဉ် ကြောင့် ဘယ်သူ့ရဲ့ လုံခြုံရေးမှ မထိခိုက်ဘူးဆိုတာ နှစ်ဘက်လုံး သဘောတူခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ အနောက်တိုင်းဟာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီး နောက် မှာ သူ့ကိုယ်သူ စစ်အေးစစ်ပွဲ အောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ ကြေ ညာဖို့ ရုရှားရဲ့ အားနည်းချက်ကို အသုံးချခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာဆက် ဆံရေးမှာ ညီမျှရေးမူဝါဒကို မေ့ ထားလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန် တော်တို့ အားလုံးဟာ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရောက်နေတဲ့ နေ ရာမှာ အဆုံးသတ်နေကြရတာပါ။
အဲဒီအချိန်က အမေရိကန်နဲ့ ရုရှား နှစ်နိုင်ငံလုံးက အရင်ဆယ်စုနှစ် တွေကထက် ပိုပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်တွေကို ခေတ်မီအောင် လုပ်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့ ကြတယ်။ လက်နက်ယှဉ်ပြိုင်မှု အသစ်တစ်ခု မလွဲဧကန်ဖြစ်မှာ လား။
အဲဒါက မုချဖြစ်ရုံလောက်ပဲ မဟုတ်ဘူး။ နေရာတချို့မှာ အ ပြည့်အဝပြောင်းလဲပြီးဖြစ်တယ်။ သံချပ်ကာကားတွေနဲ့ စစ်သုံးကား တွေအပါအဝင် ဥရောပထဲကို တပ် ဖွဲ့ဝင်တွေ ရွှေ့သွင်းထားတယ်။ နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ရုရှားတပ် ဖွဲ့ဝင်တွေ အချင်းချင်းအရမ်းမ ဝေးဘဲ ချထားတာဟာ သိပ်အ ကြာကြီးက မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ အခုဆို နှာဖျားချင်းထိလုမတတ် ဖြစ်နေပြီ။
သံခန်းဆီး (Iron Certain) အ ဆုံးသတ်ရေး ခင်ဗျားတစ်သက် တာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မိလား၊ ကျွန်တော်တို့ ဟာ နောက်ထပ်စစ်အေးစစ်ပွဲတစ် ခုအတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့် လား။
နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ စစ် ဘက်ဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရဲ့ အပြောအဆိုတွေက စစ်လိုလားမှု ပိုများလာတယ်။ စစ်ရေးယူဝါဒ ဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို တိုးပွား ဖြစ်တည်လာတယ်။ မီဒီယာတွေ က အဲဒါတွေအားလုံးကို ရွေးချယ် ပြီး အဲဒီမီးကို လောင်စာဖြည့်ပေး ကြတယ်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ဆက်ပြီး တော့ ပိုဆိုးရွားလာတယ်။ ဒီအ ခြေအနေက ကမ္ဘာကြီးဟာ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် နေရပြီဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး ဖန်တီးနေ တယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အေးစစ်ပွဲ တစ်ခုရဲ့ ဖော်ဆောင်မှုတွေအား လုံးဟာ အဲဒီမှာပဲ။
စစ်အေးစစ်ပွဲဟာ ပြင်းထန်လာနိုင် လား။
အင်း . . . ကျွန်တော်တို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေပြီး ဘာမှမလုပ်ဘဲ နောက်ဆုတ်နေမယ်ဆိုရင် ဘာမ ဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရုရှားအကြောင်းပြောရအောင်။ ရုရှားဟာ ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ လို ခံစားနေရဆဲပဲလား၊ တူညီတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိနေတုန်းပဲ လား။
ဒါပေမဲ့ ရုရှားဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တစ်ခုမဟုတ်သေးဘူးလား။
ရုရှားဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိ နေပါတယ်။ လမ်းတစ်ဝက်ကို ရောက်နေပါတယ်။ အသွင်ကူး ပြောင်းဆဲ ထွန်းသစ်စနိုင်ငံ ၃၀ လောက်ရှိပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အဲဒီနိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး အလုပ် ကောင်းကောင်းဖြစ်တာ ဘာမှ မရှိ တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရေစီမကျင့်သုံးဘူးဆိုတဲ့ စွပ် စွဲချက်တွေနဲ့ အမြဲမပြတ်ရန်စခံနေ ရပါတယ်။
ဗလာဒီမာပူတင်ကို ခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ် ရေးအရ ယုံကြည်လား။
ကျွန်တော်တုိ့အစိုးရခေါင်း ဆောင်ပိုင်းရဲ့ လှမ်းတဲ့ ခြေလှမ်း တချို့ကို ကျွန်တော်မကြာခဏ ဝေဖန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော် သူ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်။
စီးပွားရေးဆက်ပြီး ယုတ်လျော့ နေမယ်ဆိုရင် ပူတင်ဟာ သူ့ရဲ့ ဥရောပနဲ့ အနောက်တိုင်းကို ထိပ် တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး သူ့ရဲ့ မူဝါဒကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် ထိန်း သိမ်းနိုင်မလဲ။
ဒီလိုမျိုး လေးစားသမှုရှိရ မယ့် အခြေအနေမှာ မှားယွင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မထားပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လိုအပ်တဲ့ စွန့် လွှတ်အနစ်နာခံမှု ဘာမဆိုလုပ် ဆောင်လိုတဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးစွန့်လွှတ်မှုတွေလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့ နောက်ထပ်လူတွေရှိ မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်မိဘူး။ စစ်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာ လူပေါင်း သန်း ၃၀ လောက်အသတ်ခံခဲ့ရပါ တယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာရော၊ ဒီကနေ့ ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာမျှော် လင့်လို့ရလဲ။ ရုရှားနိုင်ငံအတွက် တစ်ချိန်က ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ အများကြီးဆီက အခုကျွန် တော်တို့ ဘာမျှော်လင့်လို့ရလဲ။ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ သူတို့တွေထဲက အများကြီးဟာ လူတွေအားလုံးထဲ မှာ ပိုပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့ မှုတွေလုပ်ဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) အရေး ယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြတယ်။ သူတို့ဟာ အဲဒါတွေကို ရုရှားကို အပြစ်ပေး ဖို့အတွက် လုပ်နေကြတာလား။ ကျွန်တော်တို့ ရုရှားတွေနဲ့ ဂျာမန် တွေဟာ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပေါင်း စည်းမှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံ ရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ ပြန်စတင်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အချင်းချင်း တစ်ခါပြန်ယုံကြည်မယ့် နည်းလမ်း တစ်ခုရှာရမယ်။ ကျွန်တော့်ပြောစကားတွေကို အမှတ်ရပါ။ ကျွန် တော်တို့ဟာ ဂျာမန်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေ ဖြစ်ရတာကို သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်သူတွေကလည်း ဒါကို လို လားပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီနေရာ မှာ ရုရှားပြည်သူတွေအတွက် ပြောနေတာပါ။ ပြည်သူ့အမြင်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
Bild သတင်းဌာနတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာ အမေရိကန် သမ္မတအသစ် ဒေါ်နယ်ထရန့်က နေတိုးအဖွဲ့ကို အသုံးမဝင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ သဘောထားအမြင်မျိုး ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ်။ အဲဒီ ခေတ်တွေတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဝါဆောပဋိဉာဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။ လန်ဒန်မြို့မှာ နေတိုး ကောင်စီ အစည်းအဝေးတစ်ရပ် လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေး က ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တာဟာ စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး မဟာမိတ်တစ်ခုဖြစ် တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီမေး ခွန်းဆီ နေတိုးအဖွဲ့ပြန်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။
ဂျာမနီသမ္မတသစ် ဖရန့်ဝေါ်လ် တာစတိန်မီယာကို ခင်ဗျား ဘယ် လို မျှော်လင့်ထားလဲ။
သူ့ကို ကျွန်တော်ချီးကျူးဂုဏ် ပြုခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ရုရှားအပေါ် ကောင်း ကောင်းနားလည်ပေးမယ့် သူတစ် ယောက်လို့ မှတ်ယူရလား။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အထူးတ လည်နားလည်ပေးဖို့ ဘာမှမလိုပါ ဘူး။ နားလည်မှု အများကြီးရှိဖို့ လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးလေး နားလည်ပေးတယ်ဆိုရင် လုံ လောက်နေပါပြီ။ ရုရှားဟာ အများရဲ့ အပြစ်ပေးခံနေရလုိ့ အမှတ် ထွက်နေတဲ့ လူတွေရှိကောင်းရှိမှာ ပေါ့။ ဂျာမနီခေါင်းဆောင်ပိုင်းက၊ ဂျာမနီပြည်သူတွေက ဒါကို ထောက်ခံမယ်လို့ ကျွန်တော်စိတ် ကူးမရတဲ့အတွက် ဂျာမနီခေါင်း ဆောင်ပိုင်းလို့ ကျွန်တော်ပြောတာ နော်။ ဂျာမနီ-ရုရှားဆက်ဆံရေး ယုတ်လျော့စေဖို့ ခွင့်ပြုထားတယ်။ ဂျာမန်တွေ၊ ဂျာမနီက ပြည်သူတွေ ဟာ သူတို့နဲ့ ရုရှားကြားမှာ အာ ဃာတအသစ် မဖြစ်ပေါ်စေချင်ကြ ဘူးလို့ ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည် တယ်။
ဂျာမနီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ခင် ဗျားပြောတော့ ရုရှားအပေါ် တား ဆီးပိတ်ဆို့တာတွေကို အဓိက ထောက်ခံနေတဲ့ အဓိပတိအန်ဂျ လာမာကယ်ကို ဆိုလိုတာလား။
သူ့ကို ကျွန်တော်သဘော ကျပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်အ ရမ်းမြင့်တဲ့ အဆင့်အတန်းမှာ ထားပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်အနေ နဲ့ သူ့အတွက် ကျွန်တော်ကောင်း ကောင်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒါ ဟာ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အရမ်းစိတ် ခံစားပြီး ချတတ်တဲ့အတွက် ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားသိပါတယ်။ ရာဇ ဝင်က မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို လုံးဝချမှတ်လိမ့်မယ်။ ကျွန် တော့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ ကြိုးပမ်း မှုတွေဟာ အချည်းနှီးမဖြစ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အဆုံးသတ် ထိ ကိုယ်တိုင်ကတိပြုထားတဲ့ အ တိုင်း ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။